Burcadda Muqdisho oo la soo baxday hab cusub oo ay wax u dhacaan | KEYDMEDIA ONLINE
Burcadda Muqdisho oo la soo baxday hab cusub oo ay wax u dhacaan
Burcadda dhaca u geysata shacabka gobolka Banaadir ayaa la soo baxay xeelad cusub oo todobaadkaan si weyn looga dareemay magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kooxaha burcadda ah ee dhaca ka geysta magaalada Muqdisho, ayaa billaabay hab cusub oo ay wax u dhacaan, kaas oo u muuqda in laga soo min-guuriyay tuugada qanacsatada Soomaaliyeed ku boobta dalka Koofur Africa.
Tan iyo billawgii sanadkaan waxaa laba jibaarmay, kooxaha dhaca ka geysta Caasimadda, waxaana cirka isku shareertay cabashada shacabka ku dhaqan Gobolka Banaadir, kuwaas oo ka andacoonayay kooxo ku hubeysan qoryaha fudud, oo taleefannada kula baxsada mootooyin.
Hayeeshee, hadda xaalka ayaa u muuqda inuu ka sii daray, kadib markii ay burcaddu billaabeen in ay maalinta cad boobaan goobaha ganacsiga ee ku yaalla, waddooyinka waaweyn ee Muqdisho.
Ku dhawaad 10 xarumood oo u badan goobo lagu iibiyo electronic-ga ayaa la musalafiyay todobaadkaan, Kaamirooyinka qarsoon oo duubay burcadda oo dhaca geysanaya ayaa muujinaya dhallinyaro bastoolado ku hubeysan oo baco ku guranaya qalab u badan taleefanno.
Kooxdaan oo koofiyado iyo Af-saar (Mask) wajiga iyo madaxa ku qarsaday, ayaa marka hore u soo galaya goobaha ganacsiga, sida dad adeeganaya, ugu danbeynna waxa ay billaabayaan in ay hub la soo baxaan dadkana ku qasbaan in ay xabadka dhulka dhigaan inta ay boobka wadaan.
Dhanka kale, howlgal ay ciidamada Booliska Gobolka Banaadir xalay ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyinka caasimadda waxa lagu soo qabtay ku dhaaad 15 dhallinyaro ah oo dhac u geysanayay shacabka.
Kooxaha wax ku booba Bastooladaha iyo qoryaha sida AK47, waxaa barbar socdo kooxo kale oo ku hubeysan seefo iyo middiyo, kuwaas qofka yadda ku billaaba ka hor inta aysan ka furan waxa uu wato.
Inkastoo Maamulka Gobalka Banaadir uu ku dhawaad saddexdii bilba mar soo bandhigo kooxo la sheegay in ay boob ku hayeen shacabka, haddna waxaa marba mark aka danbeysa sii kordhaya boobka lagu hayo bulshada ku dhaqan caasimadda.